Warbixin: Real Madrid oo laga yaabo iney Gareth Bale u ogolaato inuu si xor ah kaga tago xagaagan. – Gool FM
(Madrid) 17 Luulyo 2019. Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa iney quuldareyneyso qorshe layaab leh kaas oo ay xiddiga reer Wales Gareth Bale ugu ogolaaneyso inuu si xor ah kooxda uga baxo xagaagan.
Los Blancos ayaa la fahamsan yahay iney qasab ku tahay go’aan ka gaaridda arrinta Gareth Bale maadaama Zidane uu maamulka u xaqiijiyay inuusan xiddigaan ka mid aheyn qorshaha fasalka dhawaan bilaaban doona.
Si kastaba, Real ma heleyso dalab rasmi ah oo xiddigaan ku aadan, iyadoo wararka qaar ay qirayaan in xiddigaan uu doonayo nafsadiisa inuu kala baxsado Santiago Bernabeu.
Warbaahinta Spain qaarkood ayaa sheegaya in Madrid ay ku qasban tahay iney lacagaha xiddigaan hoos u dhigto si ay u hesho kooxo xiiseynaya, AS ayaana qireysa in ugu dambeynta ay Madrid aqbali karto iney ku qasaarto xiddigaan isla markaana si xor ah ugu ogolaato inuu kooxda kaga baxo.
30-jirkaan wuxuu kooxda ka heystaa heshiis saddex sano ah, kaas oo mushaar ahaan muddadaas kaga qaadanaya lacag dhan 90 Malyan oo Yuuro, kaliya kooxdisii hore Spurs ayaana lala xiriirinayaa xiddigaan.